ရေအရည်အဖြစ်တည်ရှိနေနိုင်သော ဂြိုဟ်များတည်ရှိရာ ကြယ်ဝန်းကျင်ရှိ ဒေသအပိုင်းအခြား
↑ "Prevalence of Earth-size planets orbiting Sun-like stars" (October 31, 2013). Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. doi:10.1073/pnas.1319909110. Bibcode: 2013PNAS..11019273P. Retrieved on November 5, 2013.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂိုလ်းဒီလော့ဇုန်&oldid=356896" မှ ရယူရန်
၁၇ မတ် ၂၀၁၇၊ ၀၈:၀၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ မတ် ၂၀၁၇၊ ၀၈:၀၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။